Thu, May 26, 2022 | 14:05:45 NST
प्रश्नः म दुवईमा सुरक्षागार्डको नोकरी गर्दछु। युएईको मिनिस्ट्रि अफ फरेनको नयाँ नियम अनुसार कम्पनीले १० पासको सर्टिफिकेट भेरीफाइ गर्न भनीरहेको छ। यहाँ पुग्नु भन्दा पहिला नेपालबाट नि छाप गर्नु पर्छ रे, के कसरी गर्ने हो बताइदिनुहोला। उत्तरः वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष बलबहादुर तामाङका अनुसार दुवई सेक्युरिटीमा काम गर्न शारीरिक, सुरक्षा सम्बन्धी तालिम र काम गरेको अनुभव सँगै १० कक्षा पास गरेको हुनुपर्छ। सेक्युरिटीमा काम गर्नुअघि लिइने पिएसबिडी परीक्षाका लागि न्यु...
प्रश्नः नेपालमा ५४ रिंगिट लेबि काटिन्छ भनी पठाएको अहिले यहाँ हाम्रो १५४ रिंगिट लेबि काटीरहेको छ, आइतबार दोहोरो र सार्वजनिक बिदामा पनि तलब हुन्छ भनी पठाएको यहाँ हामीलाई केही पनि सुबिधा छैन, अब हामीले के गर्ने होला ? उत्तरः मदन जी, प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पिएनसिसी)का महासचिव सोमप्रसाद लामिछानेका अनुसार ४५ रिंगिट लेबि काटिन्छ भनेर गरिएको कागज छ कि छैन त्यो चाहिँ महत्वपूर्ण हुन्छ। छैन भने पनि तपाईंलाई समस्या परेको छ। तपाई प्रवासी नेपाली समन्वय समितिको मलेसियामा रहेका सम्पर्क अधिकृत रामच...
प्रश्नः कामदारले श्रम सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दा म्यानपावर कम्पनीमा गर्ने हो कि श्रम विभागमा हो? उत्तरः रमेश जी, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुबाट रोजगारीका लागि विदेश जाँदा म्यानपावरले नै श्रम सम्झौता गर्छ। वैदेशिक रोजगार विभागले श्रमस्वीकृति दिने हो।
प्रश्नः युएई सुरक्षा गार्डको भिसा आउन कति समय लाग्छ ? कति समय बितेपछि भिसा लाग्ने / नलाग्ने पक्का हुन्छ ? उत्तरः राजेश जी, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष बलबहादुर तामाङका अनुसार सुरक्षा गार्डमा कुन क्षेत्रमा जाने हो त्यस अनुसार भिसा लाग्ने समय निर्धारण हुन्छ। तपाईं निजी क्षेत्रमा सुरक्षा गार्डको काम गर्न चाहनुहुन्छ भने कामको निवेदन दिएको २ दिनमा नै भिसा लाग्छ। र सरकारी कम्पनीमा चाहिँ सुरक्षा गार्डको भिसा लाग्न कम्तिमा १० दिन र बढीमा १५ दिनको समय लाग्छ। तर समयमै भिसा लाग्न को...
नेपाली दूतावासले कस्तो सहयोग गर्न सक्छ ?
प्रश्नः म मलेसिया आएको ३ वर्ष भयो, मेरो समयावधि (कन्ट्रयाक) पनि सकियो अनि घर जान्छु भन्दा कम्पनीले १५०० रिंगेट माग्छ , यस्तोमा हाम्रो दूतावासले केही सहयोग गर्छ कि ? उत्तरः हरी जी, तपाईंको समस्या हामीले प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पिएनसिसी)का महासचिव सोमप्रसाद लामिछानेसँग राखेका थियौं। उहाँका अनुसार, करार अवधि सकिएकाले तपाईं घर फर्कन पाउनुहुन्छ। कम्पनीले १५ सय रिंगिट मागेको कुरा चाहिँ गैर कानुनी हो । त्यसैले तपाईंले समस्या नेपाली दूतावासमा राख्नुभयो भने घर फर्कन सहयोग गर्छ। त्यससँगै तपाईं...
प्रश्नः मेरो श्रम स्वीकृती सकिएको छ। त्यसैले नविकरण गर्न चाहन्छु। त्यसका लागि कहाँ सम्पर्क गर्नुपर्ला ? उत्तरः वैकुण्ठ जी, पुनःश्रमस्वीकृति वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौं कार्यालय ताहाचल काठमाडौंमा मात्रै हुने व्यवस्था छ। त्यसैले नविकरणका लागि तपाईं काठमाडौं आउनै पर्छ। श्रम स्वीकृति नविकरण नगर्दा विदेशमा अप्ठेरो आइपर्दा सरकारले दिने क्षतिपूर्ति पाइन्न। त्यसैले छुट्टिमा आएका बेला पुनःश्रमस्वीकृति गराउनु होला।...
प्रश्नः मलेसियामा ३० महिनाअघि सडक दुर्घटनामा परेपछि उपचार गराइरहेको छु। १६ जुन २०१५ मा दुर्घटनामा परेँ। श्रम स्वीकृति १८ अगष्ट २०१८ मा र बीमा पनि उही मितिमा सकिन्छ। अब म नेपाल आउन अझै एक वर्ष लाग्छ होला। मैले वैदेशिक रोजगार विभाग र बीमाबाट पाउने क्षतिपूर्ति पाउन सक्छु कि सक्दिन् ? मेरो घाँटी भाँचिएको छ। टाउको र हात अलि अलि मात्र चल्छ। उत्तरः गोविन्द जी, श्रम स्वीकृति गरेपछि सम्झौता अवधिमा नै दुर्घटनामा परेकाले तपाईंले क्षतिपूर्ति पाउनुहुन्छ। उपचार गराएको कागजात चाहिँ सुरक्षित राख्नुहोला। तपाईं...
प्रश्नः मेरो एक आफन्त (महिला) हाल साउदी अरेबियामा सरसफाई कामदारमा क्रियाशील छिन्। करीब ३ मिहना अघि उनलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउदा दलाल मार्फत ६० हजार रुपयाँ म्यानपावरमा वुझाएको रसिद मसँग छ। फ्रि भिसा तथा टिकटको व्यवस्था हुँदाहुँदै भारी रकम लिएकोमा अव उक्त बुझाइएको रकम फिर्ता लिन सकिन्छ कि सकिंदैन ? यदि सकिन्छ भने प्रक्रिया के हुनसक्छ ? उत्तरः अम्बर जी, पिपुल फोरममा आवद्ध अधिवक्ता मन्जु सुवेदीका अनुसार तपाईंसँग म्यानपावरलाई बुझाएको रसिद छ भने म्यानपावर विरुद्ध काठमाडौंको बुद्धनगरमा रहेको वैदेशिक...
प्रश्नः कतारबाट एक बर्षमा घर फर्किन पाइदैन र ? उत्तरः सागर जी, कतारमा रोजगारीका लागि जाने कामदारले २ वर्षको सम्झौता गरेर जानुपर्छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व महासचिव कमल तामाङका अनुसार काम चित्त बुझेन अथवा केही समस्या परेर फर्कन चाहेको भए नेपाल फर्कन मिल्छ। तर टिकट चाहिँ आफैंले काट्नु पर्छ। तपाईंले सम्झौता गरेको अवधि पूरा गरेर फर्कंदा भने कम्पनीले नै फर्कने टिकट काटिदिन्छ।...
प्रश्नः पोल्याण्डमा नेपाली कामदारको मागको बारेमा सुन्दैछु। यदि त्यो बैधानिक हो भने, कृपया यस बिषयमा बिस्तृत जानकारी को आशा राख्दछु। रोजगारीका लागि जान कति खर्च लाग्छ होला ? उत्तरः सन्तोष जी, पोल्याण्ड रोजगारीका लागि नेपाल सरकारले खुल्ला गरेको देश हो। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व महासचिव कमल तामाङका अनुसार, पोल्याण्डले कृषि र कुखुरा फार्ममा कामदार लैजान्छ। तपाईंले भरपर्दो म्यानपावरबाट पोल्याण्ड जाने प्रक्रिया गर्न सक्नुहुन्छ। पोल्याण्डका लागि भिसा नेपालबाट लाग्दैन। म्यानप...